Yusuf Garaad: Kulan Geesinnimo
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Shiikh Maxamuud, ayaa shalay xafiiskiisa ku qaabbilay Mudane Cali Khaliif Galaydh, oo hore dalka uga soo noqday Ra’iisal Wasaare, dhowaanna loo doortay hoggaanka Khaatumo.
Mar aan Mudane Cali Khaliif kula kulmay Muqdisho bishii hore, waxaa uu adeegsaday ereyga ah aniga iyo Madaxweynuhu faataxo isuma akhrinno laakiin dan ayaa naga dhexeysa. Ereygaas ayaana laga fahmi karaa halka ay kala joogeen oo dadka qaar ay kala socdeen saxaafadda.
Mar haddii la fahmo in haddii aan Soomaali nahay, si kasta aan u kala aragti duwanaannee ay dani naga dhexeyso, in la iska wareysto waxaan u qabaa in ay tahay tallaabada koowaad ee horseedi karta in laga wada shaqeeyo sidii aan danteenna ku gaari lahayn.
Waan soo dhoweynayaa kulankaas geesinnimo iyo kuwa la nooca ah.
Posted by Yusuf Garaad at 08:55:00
Gurieceel dagaalka Ka Dib
Saaxiibkeey Cabdishakuur Mire Adan AUN
Dowlad Wacdi Kama Rabo